Herinadron'ny FANORONA (15 - 22 Jona)
Ny taona 2016 no niforona ny fikambanana Iray. Tanora avy amin’ny sehatrasa maro samihafa ary saropiaro amin’ny hasin’ny soatoavina Malagasy no mivondrona ao ka mitondra ny traikefa hananany avy hampandrosoana an’i Madagasikara.
Manoloana ny fianaky ny fanatontoloana dia tsapa fa tsy mahafantatra intsony izay tena fototry ny maha-izy azy ny Malagasy, indrindra ny tanora. Very tanteraka ny soatoavina sy ny Hasina maha-Gasy. Mihavery toy izany ihany koa ny fomba amam-panao raha tsy hilaza fotsiny hafa tsy ny lalao sy kilalao isantsokajiny fanaon’ny zaza Malagasy fahagola.
Zary lasa nizarazara nohon’ny antony ara-politika sy ara-toekarena ny Mpiray Tanindrazana ka lasa voambolana sisa fa tsy niainana intsony ny Fihavanana sy Firaisankina.
Izany rehetra izany no nahatonga ny fikambanana nisafidy ny hifantoka amin’ny lafiny kolotsaina sy soatoavina. Heveriny mantsy fa ny famerenana amin’ny toerany ny Soatoavina Malagasy amin’ny alalàn’ny kolontsaina no hahatongavana amin’ny tena Firaisampirenana ka hahafahan’ny Malagasy mampandroso an’i Madagasikara.
Anisan’ny tena hilofosan’ny fikambanana ny fampivoarana ny kolotsaina sy fitadiavana famatsiambola hanampiana ireo vondromparitra amin’ny asa fampandrosoana ataon’izy ireo, indrindra eo amin’ny lafin’ny kolotsaina.
Tsy natao hitadiavambola ho azy tenany ny fikambanana IRAY fa mametraka ny tenany ho mpanelanelana eo amin’ireo vondromparitra sy ireo mpamatsy vola isankarazany, izay maniry hitondra ny anjara birikiny amin’ny tetikasa samihafa mahakasika ny kolotsaina sy ny soatoavina.
Maherin’ny 20 ny mpikambana ao amin’Iray Madagasikara ka ireto manaraka ireto no mandrafitra ny birao:
Filoha : Eris RABEDAORO
Filoha Lefitra : Hasina RAKOTOMANDIMBY
Mpitambola : Njaratiana ANDRIAMIALISON
Mpitantsoratra : Onja RASAMIMANANA
Mpanolotsaina : Nofy RADISON, William ANDRIAMBOLOLONA RAKOTONDRAVOAVY, Herinomenjanahary SOLONANTENAINA, Halisoa RAZAFINDRAZAKA, Holy RAZAFINDRAZAKA